Singapour: Tokony ho ankatoavin’ny fanjakana ho ara-dalàna ve ny varotra taova? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2008 17:41 GMT
Misy adihevitra mafonja miainga ao Singapour : Tokony hankato ny varotra taova ho ara-dalàna ve ny governemanta ? Nanomboka tamin’ny volana lasa iny ny adihevitra raha voasambotra sy nampidirina am-ponja ireo tanora Indoneziana roa nikasa hivarotra ny voany tamina lehilahy mpanankarena mpanao afera iray tao Singapour. Ny asa famindràna taovan’olombelona dia “mandràra ny fanomezana taova, na rà ka sandaina takalo ” ao Singapour.
mr wang dia maneho mazava tsara ny resaka éthique ao anatin’ilay resaka:
“Ny tsindrian’ny éthique dia hoe ny varotra taova dia mety hitondra amin’ny fanararaotana ny mahantra sy hanimba ireo malala-tànana tsy dia mànana ny ampy loatra ara-tsosialy ary tsy manam-pidiny amin'ny fahafantarany an’izany.”
Mitàna ny laharana fahadimy eran-tany amin’ny vokatry ny aretin’ny voa (insuffisance rénale) i Singapour. Raha araka ny famakafakana iray, 3,500 raha kely ny olona tratry ny aretin’ny voa ao ; 600 amin’ireo ny ao anatin’ny lisitra famindrana taova. Nefa tsy maintsy miandry hatramin’ny sivy taona any ry zareo ireo mba hahazo avy amin’ireo mpanolotra aorian’ny fahafatesana.
I Blinkymummy dia mankasitraka ny fankatoavana ny varotra taova:
“Izaho manokana dia resy lahatra fa tsy dia misy antony loatra hanakànana ny varotra taova, raha toa ka tanterahana ao anaty fifanarahana voafaritra mazava tsara ny fifampiraharahana. Nahoana no amelana ho faty olona iray ao anatin’ny lisitry ny famindràna taova satria hoe ny fiankaviany na ny namany dia tsy misy manana voa mifanaraka amin’ny azy?
“Ny ambony indrindra ho an’ny mpividy sy ny mpivarotra, tokony hahafantatra tsara mihitsy ny zavatra mety hiseho ny roa tonta. Ary ny tsara toerana indrindra hitàna ny toeran’ny mpitsara dia ny fanjakàna. Satria izy faran’izay handaitra sy ho tsara amin’ny fanatanterahana antsakany sy andavany izay fepetra ilaina. “
Nefa nanana fomba fijery hafa kosa ny mpamaky iray:
“Tena ho mpitsara marina tokoa ve aloha ny fanjakàna? Eny, raha any amin’ny firenena filamatra. Fa raha mbola tsy misy ny firenena filamatra, tsy mihevitra aho fa hoe ny famelàna ny fanjakana hanao ny asan’ny mpitsara dia tsy hitera-doza.
“Ao anatin’ny fivarotana taova, ny mahantra dia tsy ho afaka velively hanam-bintana higoka fiainan-tsambatra ho azy manokana, fa dia fotsiny hoe afaka nisintona ny ankohonany hiala ao anaty fahantràna. Tsy everiko mihitsy hoe ny fanjakana no ho hanana fahafahana ara-moraly hitànana io toeran’ny mpitsara ny ho làlam-piainana io.”
Nametraka lahatsoratr'i Jennifer Yeo& Madan Mohan i Singapore Law Watch . Resy lahatra ireo mpanoratra fa ahazoana tombony ny varotra taova:
“Ny fanolorana taova, na dia hisy takalony aza, dia mety hahatsaratsara ny fiainan’ny andaniny sy ny ankilany izay samy tsy mahita làlan-kivoahana amin’ny olan’ny fahasalamana na ny fahantrana. Raha toa ny fanjakana – sy ireo tia manampy ny mpiara-belona aminy – tsy afaka manampy ireo mahantra mba hisedra ny olany, tsy tokony mihitsy hanangana sakana hafa indray ho azy ireny.
“Afaka mijoro ho mpitarika i Singapore sady manome ohatra tsara ho fiandohana ho an’ny fikambanam-be iraisam-pirenena mba hankato ny varotra taova. Manana ny fotodrafitrasa rehetra ilaina hanamoràna izany fandraharahàna izany ny Repoblika.
“Hevitra iray ny hametrahana rejisitry ny aretin’ny voa mba hanangonana sy hitiliana ireo mpanolotra sy ny mpila mba hahazoana antoka fa tsy nisy ny faneriterena, na fanararaotana. Fikambanana iray mpanao asa soa na fitantanana tsy miankina no afaka handray an-tanana izany sy ny rehetra manodidina azy toy ny fanekena an-tsitrapo mazava tsara, ny fiarovana ny tsiambaratelon’ny mpanome sy mpanolotra, ny filàna, ny momba ny fandaniana ara-pitsaboana, ny fiantohana, ny fanomezana tamby sy tombontsoa ireo mpanome, ny fianakaviany sy ny hafa aorian’ny famindràna”
Maro tamin’ireo soso-kevitry ny mpanoratra no nanana ny akony teo amin’ireo minisitra ao amin’ny governemanta izay nandefa tsilian-tsofina fa amin’ny hoavy dia hisy fepetra haroso mba hahafahana manao ny varotra taova. Carpe Deim-Seize the day koa dia mino fa:
“ Afaka mijoro ho mpitarika i Singapour amin’ny fandinihana sy fametrahana rafitra afaka miantoka ny varotra taova ka hisian’ny fifandanjàna eo amin’ny filàn’ny isam-batan’olona sy ny sarambabem-bahoaka.”
Saingy manohitra ny varotra taova ny Fikambanana ara-pahasalamana ao Singapour. Kianin’i Angry Doctor io fomba fijery io :
“I Angry Doc dia mahatsapa fa rehefa tompon’antoka amin’ny ara-moraliny manokana ireo mpitsabo, ary amin’ny maha-asa azy, ny éthique-ntsika dia mamela antsika hisafidy ny handray anjara na hisintaka amin’izay mety ho endrika iray fandraisana anjara amin’ny traitement, toy ny maha-mpiaro ny mararintsika, ny anjara andraikitsika rehefa sendra olana ara-pitsaboana dia tokony ho fandraisana anjara mavitrika amin’ny fampianarana sy fanomezam-baovao. Tsy tokony hanandrana handositra andraikitra isika amin’ny fampiasana ny resaka moralin’ny mpitsabo sasany ho fanilihana (fialàna bala). “
Ireo mpitoraka blaogy avy amin’ny finoana Katolika dia mitsipaka ny varotra taova. A quiet moment dia nizara santionana vinavina avy amin’ny katolika :
“Ny taova iray nomena dia mety hanavotra aina iray nefa iza no handoa be? Mety ho voatampi-maso ny olona iray, voatery, voatsindry, naharay fandraviravizana na koa mety mihitsy novonoina mba hahazoana maka ny taovany, ho an’ilay mila izany.
“Mety hahazo ny fanazavana marim-pototra ve ilay marary, ary afaka hahatakatra hoe hanao ahoana ny ho fiainana aorian’ny fandidiana famindràna toy izay hiaina fiainana anaty nenina avy amin’ny rarin-tsaina (depression) sy aretina fahita aorian’ny fandidiana famindràna .”
Tsikerain’i Sze Zeng ny fivarotana izay rehetra mikasika ny aina:
“Ao amin’ny varotra taova, ny famaritana hoe ‘mpanome taova’ dia toa fifanoheran-kevitra iray eo amin’ny sehatry ny varotra tsy misy fifamenoana fa sandaina vola, ary tsy misy hoe mpanome fa tompony fotsiny izao, tsy hita taratra ao anatin’ilay fifandraisana ny fitiavana hanampy ny toa azy fa tena raharaham-barotra tsotra izao fotsiny. Ny mahasarika ho amin’ny fankatoavana ny varotra taova dia fitàran’ny fifampivarotana amin’ny ankapobeny manerana ny sehatra rehetra iainana andavanandro.”
Mampitandrina i Javert's World fa ny dikan’ny varotra taova dia ho “lasa haraton’aina ho an’ny mpanana ary ho fandripahana ny mahantra.” Mpitoraka blaogy iray hafa no manamarika ny varotra taova dia tsy hanafoana ny tsenan’ny voa any amin’ny varo-maizina:
“Hanapa-kevitra hankato ny varotra taova ny governemanta ary hametraka rafitra feno sy manaraka lamina manaraka fomba fiasa lasitra, nefa tsy antoka hanafoana tanteraka ny varo-maizina izany. Sahala amin’ny mbola hisian’ny mpampanjana-bola na feno banky aza manodidina, na ahoana ireny filokana eny anelakelan-trano ireny no mbola miroborobo mifanindran-dàlana amin’ny filokana eken’ny lalàna.”
Nefa i CTW dia manazava fa :
“Ny fanànana fepetra fanaraha-maso maromaro momba ny varotra taova dia ahafahana misoroka ny mpanera tsy hanararaotra ireo lazaina ho mpanome. Tsy te-hilaza aho hoe zavatra tsotra kely izany fa ireo tomponandraikitra ao Singapour no tena fatsora mahay mitady làlan-kidifiana.
Mampitandrina ny amin’ny mety ho fandaniana volavolan-dalàna mikendry ny hanararaotana ireo firenena mahantra mifanolo-bodirindrina amin’i Singapour koa i Anders Brink:
“Rafitra araky ny lalàna manao akory moa ity, izay hananàn’i Singapour lalàna hankatoavana ny fanararaotana ny mponin’ireo firenena mahantra manakaiky azy? Karazana hafatra toy inona no alefantsika ho an’ireo mpifanolo-bodirindrina amintsika? Raha ny foto-dresaka, eo amin’io toerana io i Singapour satria manan-karena izy, raha mahantra kosa ireo eo akaikiny. Raha rehefa manan-karena ianao, dia hiseho amin’ny hafa ho afaka manolotra lalàna fanararaotana (famoretana), mba ahoana no tianao hitondrana anao raha mahantra kosa ianao?
Ao anivon’ny resaka foana i Irana matetika satria izy irery eran-tany no firenena manaiky ny varotra voa (antsoin’ny Iraniana hoe ‘fizaràna taova’).
Fanamarihana iray nentin’ny mpamaky tao amin’ny blaogin’i no maneho mivandravandra teboka iray:
“Heveriko ho zavatra iray lehibe notsinontsinoavina dia ny fiahiana ara-holistique (ny maha iray tsy mivaky ny zavatra iray tsy azo samantsamahana) ireo mpiara-belona amintsika tratry ny aretina mitaiza, ao anatin’izany ny marary tratry ny aretin’ny voa.
“Ireo marary voa manana fahasalamana marefo dia betsaka no avy amin’ny saranga tsy dia mahazo tombontsoa loatra amin’ny resaka sosialy sy toekarena. Amin’ny ankapobeny izy ireny dia manana tosi-drà avo na diabeta, nefa koa tsy afaka hiatrika ny hamafin’ny fikarakarana ara-pahasalamana ilaina mba hisorohana izay fahasarotana mety hitranga. Vokany, haingana sy aloha be ny fahatongavan’izy ireny any amin’ny tsy fahafahan’ny voany miasa ara-dalana intsony, izay ilàna fikarakarana amin’ny alalàn’ny dialyse.
“Ahoana ary no ataontsika hisorohana izany fahavoazana lehibe izany? Tena tsara lavitra ny misoroka noho ny ‘mitsabo’, toy ity tranga ity, ny famindrana voa dia tena voafetra, ary indrindra indrindra tsy taka-bidy. Nefa ny fisorohana koa lafo.
“Ny tena tokony ho fanontaniana izany dia hoe, hatraiza no fetra azon’ny governemanta hitondràna fikarakarana ny fahasalamana mora vidy ho an’ireo olona mila izany, nefa tsy afa-manoatra. Raha ny teti-bolam-panjakantsika natokana ho an’ny fahasalamana, tsy dia be loatra izany, raha mitaha amin’ny sehatra hafa toy ny fiarovana”
Raha mila fandalinana misimisy kokoa momba ny varotra taova (na ny fizahantany miharo famindràna) eran-tany, ny OMS dia manana fitaovana ho loharano tsara tokoa.